Uhlobo luni lwezicathulo olufanele kakhulu ukuhamba olwandle? | Amadoda aSitayela
Hamba olwandle. Barefoot noma ngezicathulo ziphi?
UPaco Maria Garcia | | Ukufaneleka
Ihlobo selifikile. Ibhishi yindawo okuyintandokazi yabantu abaningi eholidini, ukusizakala ngezinsuku ezishisayo, ukhohlwe ngomsebenzi, inqubo, ukucindezeleka.
Omunye wemisebenzi emnandi kakhulu ebhishi ukuhamba esihlabathini, ngasolwandle. Isikhathi sesifikile nquma ukuthi sizokwenza ziphi izicathulo, ukuthi iyiphi efanelekile.
Into yokuqala ukugqamisa i- umuzwa wenkululeko nokwaneliseka lokho kukhiqiza ukuxhumana okulula kwendawo yolwandle ngamathe ezinyawo.
Abanye ochwepheshe nabo bakhomba izinzuzo zenhliziyo, ngaphezu kweqiniso lokuthi ukuhamba esihlabathini kukhuthaza ukudluliswa kwamanye amaminerali afana ne-iodine, kuwusizo kakhulu ekunikeni isikhumba amanzi nokuthinta imisipha
Akuvamile, kepha kukhona labo abakhetha lokho ungabeki isikhumba ngqo endaweni enesihlabathi, kungaba ngenxa yokududuzeka noma ukwesaba ukulimala. Kuyiqiniso ukuthi kunezikhathi nezindawo lapho ukuvikela izinyawo zakho kuyindlela engcono kakhulu: izindawo ezinamatshe amaningi noma amagobolondo abukhali, kanye nezindawo ezishelelayo njengamatshe amakhulu.
Kunezinketho eziningi zokufaka izicathulo, kusuka kuma-flip flops nezimbadada kuzo zonke izinhlobo zezicathulo ezingangeni manzi.
Kusukela eqenjini lokuqala siqokomisa i- usizo: kulula ukugqoka, kulula ukusuka. Ngokuqondene nezicathulo ezivaliwe ezivikela ngokuphelele unyawo, okuhlukahlukene kufaka phakathi amamodeli anamandla wokuhamba okude noma ukuhamba izintaba, evumelana nezindawo ezithambile noma izindawo ezinamatshe ezingashelela.
Kukhona futhi amamodeli alula (evame ukubizwa njengezicathulo zamanzi), izesekeli ezenzelwe ukubhukuda noma ukuntweza ngazo, kepha lokho kuyasebenziseka ngaso sonke isikhathi.
Run onqenqemeni lwe ulwandle ngomunye wemisebenzi yasehlobo oyithandayo. Yize kunemibono ngalo mkhuba nokuphikisana nalo mkhuba, ukugijima esihlabathini ngezinyawo ezingenalutho kuyintokozo kwabaningi.
Kulabo abakhetha ukugqoka izicathulo, okuwukuphela kwesincomo ukuthi ube ne- imodeli yezemidlalo ekhethekile yayoNgokuqinisekile bazogcina begcwele isihlabathi futhi awufuni ukubahlanza nsuku zonke.
Imithombo yesithombe: Love in Care /Isiko Nenkulumo-ze
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Ukufaneleka » Hamba olwandle. Barefoot noma ngezicathulo ziphi?
Izimbadada ezinamathelayo, izicathulo ezivamile ezishanela kuleli hlobo
Ofeleba abane-motif noma isizathu sokugqoka amakepisi